Barlamanka Somaliland oo doortey gudoomiye cusub
HARGEYSA , Somaliland- Golaha Wakiilada Somaliland waxay Guddoomiye u doorteen Baashe Maxamuud Faarax oo hore usoo ahaa guddoomiye ku xigeenka Golaha Wakiilada.
Xildhibaan Baashe waxaa la tartamay Xildhibaan Cabdiraxmaan Talyanale, doorasho gacan taag ah ayaa ka dhacday golaha, waxaana 39cod ku guulaystay Baashe Maxamuud Faarax , halka Cabdiraxmaan Talyanle uu helay 38cod.
Doorashada Guddoomiyaha cusub ee Golaha wakiilada waxay timi kadib markii , Guddoomiyihii Golahaasi ee 12sano lasoo dhaafay Cabdiraxmaan Ciro uu iska casilay xilkaasi, isagoo isu sharaxay Madaxweynaha Somaliland.
Gudoomiyaha cusub iyo gudoomiyahii hore ayaa horey isugu gacan qaadey aqalka Barlamanka kadib markii codbixin muran dhalisay ka dhacdey gudaha aqalka wakiilada Somaliland.
Somaliland ayaa la filaya iney ka dhacdo doorashada madaxtinimada iyadoo ay ku tartamayaan xisbiyada kamid yihiin Kulmiye iyo Wadani.
Warkaan qayb kamid ah waxaa nagu biiriyey Wariye Jamac Deprani.
WARBIXIN: Dowlada Puntland oo ka aamusan Weerarkii Af-urur
Puntland 02.09.2017. 21:05
Ciidamada Ilaalada Badda Puntland oo qabtey Dooni hub sharci daro ah sida [SAWIRO]
Puntland 23.09.2017. 09:42
Farmaajo oo Somaliland ugu baaqey in ay hormuud ka noqoto midnimada 26.06.2019. 07:15